Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Izipompo zeBlue Bath / WOWOW Isepha yokuhambisa isepha engenachukumiso - Igwebu
WOWOW Isepha yediskhi yokuhambisa engenantambo-Igwebu
ikaliwe 5.00 Kwi-5 esekelwe kuyo 3 amanqaku umthengi
Isixhobo sesepha esingabambekiyo-Igwebu
SKU: Idiskhi yokuhambisa engenasiphelo-2-2 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Izipompo zeBlue Bath tags: I-Deck Ephakamileyo, Isenzi sentshukumo, Isixhobo esingashukumiyo sentsimbi
Brass, Chrome, amagwebu ukutshiza
Ndonwabe kakhulu yile nto yokuhambisa isepha ngokuzenzekelayo. Ndifuna indlela yokusefa izandla zam ngaphandle kokuchukumisa nantoni na kwaye indifanele ngokugqibeleleyo.
Kunqabile ukuba ndibhale uphononongo kodwa ndaye ndagqiba kwelokuba ndibhale le nto kuba le nto yokuhambisa isepha ayinanto isebenza ngokugqibeleleyo. Ngokuqinisekileyo yicebise kwabo bafuna isixhobo sokuhambisa isepha esingachukumisiyo.
Mna nomfazi wam sasiyithanda kakhulu. Ndizibonile izikhalazo ezininzi malunga nesixhobo sokuhambisa isepha esingachukumisiyo. Umzekelo, inzwa ayibuthathaka kangako kwaye ngamanye amaxesha ayinampendulo kwaye ulwelo luyatshona. Nangona kunjalo, ezi meko azikaze zenzeke kwesi sixhobo sesepha yesixhobo.